Heshiiska Jabuuti “Ma fursad dahab baa mise waa shimbarayahoow heesa?’’
Faalada Hashiiska Jabuuti 13.06.2008
Dalka Jabuuti aynu walaalaha nahay waxaa lagu qabtey oo lagu soo gunaanaday heshiis ay wada gaareenIsbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya iyoTFG-da, waxaana shirka maamulayey oo marti galiyey United Nation-ka wakiilkeeda Soomaaliya Danjire Ahmedou Ould Abdallah.
Shirka intuu socday waxaa yimid dalka Jabuuti xubnaha Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay si ay u dhagaystaan dhinacyada isku haya siyaasada Soomaaliya.
Shirka waxaa ka soo baxay go’aamo badan oo dhamaantood muhiim u ahaa dhinacyada is haya, iyadoo qoraalka soo baxay ee la saxiixay uu ka muuqday in qola walba tanaasul weyn samaysay si meel dhaxe la iskugu yimaado, arinkaas oo ah tilaabo guul ah oo horey loo qaaday mudana in la soo dhaweeyo run ahaantii, madaama dadka Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin dhibaato aad u mug weyn.
Hasayeeshee waxaa isla markiiba soo shaac baxay in dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ay ka muujiyaan aragtidooda ku aadan heshiiska.
Beesha caalamka dhamaantood way soo dhaweeyeen una riyaaqeen, halka Soomaaliduaad moodo in ay u kala baxeen dhawr qaybood.
Qayb si cad u diiday oo markii horaba diidanayd shirka.
Qayb soo dhawaysay una riyaaqday goaanada labada dhinac ay qaateen.
Qayb shaki ka qabta sida shirka u hirgalaayo.
Waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo dhowr qodob oo dadka Soomaaliyeed muran weyndhax dhaliyey, kuwaas oo kala ahaa.
In Qaramada Midoobay iyadoo waafaqsan qaraarka 1814 ee Golaha Amaanka la warsado in120 Maalmood gudahood Soomaaliya ugu dirto ciidan caalami ah oo xasiliya dalka Soomaaliya, ciidamadaas oo laga keenaayo wadamada saaxiibka la ah Soomaaliya, oo aysan ku jirindalalka dariska la ah Soomaaliya, sida Ethopia, Kenya, Eritareeya iyo Jabuuti.
In 120 Maalmood gudahood oo ka bilaabata marka heshiiskaan la saxiixay ay TFG-da ku dhaqaaqdo sida dowlada Ethopia hore u go’aansatey in ay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya, marka tiro ku filan ciidamada Qaramada Midoobay yimaadan Soomaaliya.
Ururka Isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya uu meel cad iska taago joojiyo isla markaana cambaareeyo falalka hubaysan ee gudaha Soomaaliya, isla markaana iska fogeeyaan kooxaha iyo shaqsiyaadka aan u hogaansanayn qodabada lagu heshiiyey.
Qodabka kowaad ayaa si cad u sheegaya in horeyQaramada Midoobay go’aan ugu gaartey in Soomaaliya ay u diraan ciidamo caalami ah oo tiradoodu dhan tahay 28500 askari balse ku xirnaa go’aankaas in dhinacyada isku haya siyaasada Soomaaliya isla ogolaadan, waana sababta ay Jabuuti u yimaadeen Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay, si arinkaas u xaqiijistaan, marka qaraarka 1814 ayaaba si cad Ethopia dalka Soomaaliya uga saarayo bilaa shuruud, waana qodobka Isbaheysiga dib u xoreynta Soomaaliya kalsoonida weyn ay ku qabaan ee u cadeeyay in dalka Ethopia laga saarayo.
Qodabka labaad oo ah kan mugdiga ku jira ee dadka Soomaaliyeedna badankiis fahamsanayn waxaa weeye in Ethopia shaar been ah inta loo xiro dalka Soomaaliya looga saaro arin ah weeye ee ma ahan sida ay u fasirteen kuwa raba inay u marmarsiiyoodan shirka iyo waxa ka soo baxayba .
TFG-da ayaa Ethopia u yeeratey ayay aqoonsan yihiin UN-ta iyo dhamaan caalamka, halka Isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya aaminsan yihiin in dalka Soomaaliya Ethopia ku qabsatey camiilo Soomaali muuqa ka ah, marka waa in la fahmaa in Ethopia Mareykanka dalkeena ku soo fasaxay haatana uu rabo inuu wadadaan ku saaro, isagoo kashanaya beesha caalamka.
Soomaalidu waxay leedahay dhaqan ku saabsan guurka kan qarsoodiga ah, TFG-da iyo Ethopia way is masaafeesteen iyadoo shacabkii Soomaaliyeed ee dalka lahaa arinkaasi si cad u diidan yihiin, marka hadii guurkii xaraanta ahaa ee ka dhaxeeyay TFG-da iyo Ethopia uu soo afjarmaayo, oo ay TFG-da si cad u waydiisanayso inay kala laabanayso arinkii hore ayna sidaasi ku soo dhamaanayso anagaa u yeeranay Ethopia maxaa ku jaban ha na dhaafaan?
Waxaa loo fasirey ayna u fasireen kuwa raba inay dadka Soomaaliyeed qaldaan in TFG-da awood u leedahay in ay go’aamiso waqtiga Ethopia baxayaan ama u kordhin karaan hadii aysan ka maarmin ciidamadeeda.
Arinka sidaasi ma ahanEthopia waa la saarayaa bilaa shuruud sida ku cad qaraarka numberkiisu yahay 1814 ee horey uga soo baxay Golaha Amaanka, marka Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa “ Hasha geela markii wax diidayso waxay ka eegtaa maqaarka dulduleelada’’, waana yaab in waxaan jirin dadka loo aqriyo madaama si cad loogu xusay heshiiska , hadii TFG-da iyo Ethopia warqad kala qoranayaan wax ka quseeya malahan bixitaankeeda waayo mar kasta waa inay baxdaa sida ku cad qaraarka Golaha Amaanka ee ka soo baxay Qaramada Midoobay.
Cambaareynta kooxaha diidan heshiiska waa mid waajib ku ah Isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya madaama meel la saarey ka bixitaanka ciidamada Ethopia sida ku cad warqada heshiiska, cidii diida hirgalinta arinkaasi oo wadata qorsha kale oo kabaxsan in Ethopia ciidamadeeda dalka laga saaro waa cid aan wadin maslaxad Soomaaliyeed oo ku xiran meelo kale sida Abdulahi Yusuf, Warlords oo dhan, Cadde Musse, Dahir Riyaale, Hassan Dahir, Hassan Turki, Abuu Mansuur, Yusuf Indhocade. Alshabaab iyo kooxaha Isbaarooleyda ah.
Waayo ragakani waxay si cad u shegeen inaysan aqbalaynin in xataa ciidamo caalami ah lagu badalo Ethopia in dalka Soomaaliya la keeno, halka kuwa kale ku dhagan yihiin in ciidamada Ethopia dalka Soomaaliya sii joogto.
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa “ Nin aan ku furi doonin yuusan ku rarin’’ oo aan ula jeedo ninkii aan rabin in dalka Soomaaliya Ethopia ciidamadeeda laga saarin isla markaana ciidamo nabad ilaaliyayaal ah lagu badalin waa nin leh ujeedoo kale, waana in la iska qabtaa.
Waxaa jira shar wadayaal badan oo ka soo horjeeda heshiiska Jabuuti, kuwaas oo siyaabo kala duwan uga soo horjeeda, waana kuwa hadalo aan samaynaynin micno badan dadka Soomaaliyeed u aqrinaya, si ay u garaan ujeedooyinkooda dahsoon ee ku xiran.
Nabadda waxaa diida nin dan wata, 18 sano ayay Soomaali heshiin lahayd hadii ay garan karaan maslaxadooda waxay tahay? Marka maanta oo aad moodo in caalamka oo dhan ay taageero noo muujiyeen in la lumiyo fursadaas qaaliga ah ma ahan.
Ugu dambayntii waxaa weeye in la taageero hashiiska lagu gaarey dalka Jabuuti si looga hortago inay fashiliyaan kuwa aan marnaba doonaynin in Soomaaliya ka dhalato dowlad Soomaaliyeed oo caalamka laga aqoonsan yahay oo wax ka qabata dhibaatooyinka Dowlad la’aanta, saboolnimada, barakaca, dilalka, cadaalad darada, kala go’a, qabyaalada, eexda iyo faragalinta wadamada dariska nala ah sida Ethopia iyo Eritareeya oo kale.
Shirka waxaa raba inay fashiliyaan ugu horeyn dowlada Ethopia, camiilada ay ku shaqaysato, kooxaha fidna wadayaasha ah ee isku ekaysiiya Alqaacida iyo kuwa 18 sano ku naaxay nidaam darada baahsan ee ka jirta Soomaaliya.
Shirka hadii uu guulaysto oo Qaramada Midoobay ka dhabayso inay ciidamo caalami ah ku keenaan Soomaaliya oo Ethopia-na kaga saaraan dalka Soomaaliya oo dhan mudada lagu qorey heshiiska, waa guul lagu gaarayo Qaranimo Soomaaliyeed oo buuxda oo aan cidina u afduubnaan Karin.
Balse hadii kooxaha sharwadayaasha ee raba in Soomaaliya sida ay hada tahay sii ahaatana waxa uu heshiiska noqonayaa ‘’ Shimbirayaaloow Heesa, hees wanaagsan heesa, halkaan soo fariista” waayo hadalada ay ku hadlayaan iyo sida ay u rabaan in Tigreega dalka u sii haystawaa wax lala yaabo, sababtoo ah hadii ay xabad dalka ku xoreeynayaan yaa ka hor taagan? Hadii 4 bilood Ethopian dalka looga saaroay heshiis ku galeen Isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya ma qalad baa? Jawaabtu waa maya balse Isbahaysiga ayaad moodaa in dad badan inay ku dhaxdhuumanayeen , kuwaas raba inay jaakad diin beenaad iyo mid Isbahaysi danahooda gaarka ah ku garaan.
Hadii arimahaan oo idil ummadda Soomaaliyeed fahmi waayan oo meel cad ah wax marsiin waayan, waxay noqonaysaa in Ethopia Soomaaliya sii haysato beesha caalamkana ay iska hilmaaman arimaha Soomaaliya.
Kow waa dib u heshiisiin, dowlad loo dhanyahay oo caadil ah kadibnna lala xisaabtamo kuwii dadka Soomaaliyeed dhiibaatada ku hayey oo dhan.
Salaad walbana sidii u kala horeysaa loo tukudaa, Talo aan la ruugina waa lagu rafaadaa. ayay Soomaalidii wax garadka ahayd ku maahmaahi jireen marka xaalad jahwareer la soo gudboonaato ummadda Soomaaliyeed.
The Somali Political Columnist